အဘဖေါ ရဲ့ ဘာသာပြန် သင်္ခန်းစာ ( ၁ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » အဘဖေါ ရဲ့ ဘာသာပြန် သင်္ခန်းစာ ( ၁ )
အဘဖေါ ရဲ့ ဘာသာပြန် သင်္ခန်းစာ ( ၁ )
Posted by Foreign Resident on Apr 6, 2013 in Myanma News, Think Different | 19 comments
အဘဖေါ ရဲ့ ဘာသာပြန်
သင်္ခန်းစာ ( ၁ )
ဘာရယ် ဟုတ်ပါဘူး ။
ရွာထဲမှာ အခုတလော ၊
ရွာသူား ကြီးတွေက ၊
အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာပြန် ၊
ပို့ချနေကြတာ တွေ့ရတော့ ၊
အဘ လည်း အားကျလာပြီး ၊
သူတို့လောက် အင်္ဂလိပ်စာ ၊
အဘ တတ်သလောက်လေးနှင့် ၊
ဘာသာပြန် သင်္ခန်းစာလေး ရေးပါရစေ ။
အဲ ၊ အဘ စံနမူနာပြုပြီး ၊ ဘာသာပြန်ဆိုပြမဲ့ ၊ အင်္ဂလိပ်စာ ဆောင်းပါး ကတော့ ၊
အဘ ခု ရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာ ဖါတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ ၊
နိုင်ဂျံဂါး ဆောင်းပါးလေး တစ်ပုဒ်ပေါ့ကွယ် ။
” Asia Times Online ” ဆိုတဲ့ ဟောင်ကောင် နှင့် ယိုးဒယား အခြေစိုက် On Line သတင်းစာကြီးမှာ ၊
ဆောင်းပါးရှင် ” Larry Jagan ” ရေးတဲ့
” Politics of corruption in Myanmar ” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါး ပါဘဲ ။
မူရင်း ဆောင်းပါး ကိုမှ ဖတ်ချင်ရင်တော့ ၊ အောက်က Link ကို သွားပါကွယ် ။
” http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-01-050413.html “
အဲ တစ်ခုတော့ ခွင့်လွှတ်ပါကွယ် ၊ ဆောင်းပါး ကလည်း အရမ်းရှည်ပြီး ၊
အဘ ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ကလည်း နုံနဲ့လေတော့ကာ ၊
ဆောင်းပါး တစ်ခုလုံးကို ဘာသာပြန် မပြနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါကွယ် ။
ဟီ ဟိ ၊ မီးကျိုး မောင်းပျက် အင်္ဂလိပ်စာ လေး နှင့် ၊
လူလစ်တုန်း ဆရာကြီး ဝင်လုပ်ပစ် လိုက်ဦးမယ် ။
လွယ်တဲ့ စာကြောင်းလေးတွေပဲ ရွေးပြီး ဘာသာ ပြန်ပြလိုက်မယ် ။
ဗေပုံ ထီပုံ ထီ ။ ဟီဟိ ။
” Thein Tun has threatened to implicate ”more senior people”
if he is formally charged and tried in court “
” သိန်းထွန်း က သူ့ကို ရုံးတင် တရားစွဲဆိုမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ၊
သူ့အရင် လူကြီး တွေကိုပါ ( အမူထဲ ) ဆွဲသွင်းလိုက်မယ် လို့ ခြိမ်းခြောက် ခဲ့ပါတယ် “
( အရင် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် သိန်းထွန်း ကို ဦး တပ်မရေးမိတဲ့ အဂါဝရ အတွက် ၊
အဘ တောင်းပန်ပါတယ်ကွယ် ၊ မူရင်း စာပိုဒ် အတိုင်း တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်မိလို့ပါ )
” According toapolice source familiar with the probe,
a suitcase containing US$2 million in cash
was allegedly found in Thein Tun’s residence “
” အဲဒီ အမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ ရဲ တွေဆီက ရတဲ့ သတင်းအရ ၊
သိန်းထွန်း ရဲ့ အိမ်မှာ ငွေသား ဒေါ်လာ ၂ သန်း ပါတဲ့ လက်ဆွဲအိတ်ကို ၊
တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် “
” Both Chinese companies have voluntarily given investigating authorities
documents related to their previous deals with the MPT ministry,
including during Thein Zaw’s tenure as minister,
according to the police source “
” ရဲတပ်ဖွဲ့ ဆီက ရတဲ့ သတင်းတွေအရ ဆိုရင် ၊
တရုတ် ကုမ္ပဏီတွေ ကလည်း ( Huawei နှင့် ZTE ကို ပြောတာပါ ) ၊
သူတို့ဘက်ကနေ စတင်ပြီး လိုလိုလားလား နှင့် ၊
အမှုနှင့်ဆိုင်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် စာရွက်စာတမ်းတွေကို ၊
( ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဋ္ဌာန နှင့် ဆက်ဆံ ပေးကမ်းခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေ ၊
အရင် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းဇော် လက်ထက်ထဲက ဟာတွေ အပါအဝင်ပေါ့ )
စုံစမ်း စစ်ဆေးနေတဲ့ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း ( ရဲတပ်ဖွဲ့ ) ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ် ။
” Ina2004 contract, ZTE provideda$150 million loan to the MPT ministry
to build 300,000 fixed phone lines “
” ၂၀၀၄ ခုနှစ် က စာချုပ်မှာ ၊ ဖုန်းလိုင်း / အလုံး ၃ သိန်း ( ၃ သိန်း နော် ) တပ်ဆင်ဖို့အတွက် ၊
ZTE က ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဋ္ဌာန ကို ဒေါ်လာ သန်း ၁၅ဝ ( ဒေါ်လာ သန်း ၁၅ဝ ) ချေးခဲ့ရပါတယ် “
” That figure,aministry official at the time estimates,
was more than 10 times the real cost of the project “
” ဝန်ကြီး ဋ္ဌာန အရာရှိ တစ်ဦးက မှန်းတာကတော့ ၊
အဲဒီ ငွေကြေး ပမာဏ ( ဒေါ်လာ သန်း ၁၅ဝ ) ဟာ ၊
တကယ့် စီမံကိန်း တန်ဖိုးထက် ၊ ဆယ်ဆ မက ( မက ) များနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ် “
” In comparison, he notes that ZTE later proposed to supply Nepal
withamillion telephone lines atacost of just $7.5 million “
” သူက ( ဝန်ကြီး ဋ္ဌာန အရာရှိ တစ်ဦးက ) ထောက်ပြသွားတာကတော့ ၊
ယှဉ်ပြောရမယ် ဆိုရင် ၊ အဲဒီ ZTE ကုမ္ပဏီ ကပဲ ( Same Company ပဲ နော် ) ၊
နီပေါ နိုင်ငံမှာ ဖုန်းလိုင်း / အလုံး ၁ သန်း ( ၁ သန်း = ဆယ် သိန်း ) တပ်ဆင်ဖို့အတွက် ၊
ဒေါ်လာ ရ သန်းခွဲ ( ဒေါ်လာ ရ သန်းခွဲ ) ပဲ တောင်းခဲ့ပါတယ် “
အင်းးးးးးးး ၊ အဘ လည်း အသက်များ ထောက်လာလို့လား မသိ ၊
ဘာသာ ပြန်ရင်း ပြန်ရင်း နှင့် ရင်ဘတ်ကြီးထဲမှာ အောင့်တက်လာလို့ ၊
ဒီနားမှာ ခဏ နားပါရစေတော့ကွယ် ။
ရွာထဲက ကိုယ့်ထက် တတ်ကျွမ်းတဲ့ ဘာသာပြန် ဆရာကြီးတွေ ၊
ဆက်ပြီး ဘာသာပြန်ပေးချင်ရင် ပြန်ပေးလို့ရအောင် ၊
” Larry Jagan ” ရဲ့ ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်လုံးကိုပါ ကူးတင်ပေးလိုက်မိပါတယ် ။
( Copy Right နှင့်တော့ ညိတော့မှာပဲ ၊
ဘာသာပြန် သင်္ခန်းစာ ဆိုတော့ကာ ရလောက်မယ် / ခွင့်လွှတ်မယ် ထင်ပါတယ် )
ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြနော် ၊ ဆောင်းပါးလေးက အရမ်း ကောင်းသကွဲ့ ။
နောက်ပိုင် အခန်းတွေမှာလဲ မင်းသားတွေက နာမည်ကြီး မင်းသားတွေကွယ့် ။
ရွာသူားတွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်လာမှာကတော့ အမှန်ပဲ ။
အဲ ၊ အဘ လို ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း နှင့် ရင်ဘတ်ထဲက အောင့် အောင့်လာတတ်ရင်တော့ ၊
တစ်ခန်း နှင့် တစ်ခန်း ကို ၊ နား နား ပြီးမှ ဖတ်ပေါ့ကွယ် ။
( ဤ ဆောင်းပါး ပုံစံ လေးရေးရန် / စိတ်ကူးလေး စတင် ကွန့်မြူးမိစေခဲ့သော ၊
ဘာသာပြန် ဆရာကြီး ဦးကြောင်ကြီး နှင့် တစ်ကွ ၊
အောက်စဖုတ်တက္ကသိုလ်ကို လေးနှစ်ဆက်တိုက် ထုံးသုတ်ခဲ့ဘူးသော ၊
ပညာရှိကြီး ဦး မိုက်ကယ် ဂျော်နီ အောင်ပု တို့ကို ၊
ဤ ဆောင်းပါး နှင့် ဂါရဝ ပြုလိုက်ပါတယ် )
ရေးရင်း ရေးရင်း ၊ ရင်ဘတ်ထဲက အောင့်အောင့်လာတတ်လို့ ၊
YANGON – Signs of corruption are mounting in Myanmar,acrisis of confidence that threatens to derail President Thein Sein’s ambitious reform program. Whether Thein Sein is willing to push through top-level prosecutions, including at the tainted telecommunications ministry, could make or break the country’s transition from military to democratic rule.
Underscoring decades of unaccountable military rule, Myanmar has consistently ranked near the top of Transparency International’s global corruption rankings. Now, with financial reforms and economic liberalization measures promising to lure big new foreign investments and boost asset prices across the
economy, officials are increasingly leveraging their positions for personal gain, according to government insiders situated at the president’s office.
An investigation launched in January into alleged corruption at the Myanmar Posts and Telecommunications (MPT) ministry signaled wider mismanagement and graft at key economic ministries duringacrucial juncture in the country’s transition from military rule. While Thein Sein’s office has championed reform, many line ministries continue to operate as they did under the former military regime.
The probe into former telecoms minister Major General Thein Tun
and other high-ranking ministerial authorities represented the first time top officials have been publicly accused of graft during Thein Sein’s tenure. The move won plaudits among foreign investors, many of whom have called for greater transparency and rule by law before committing significant funds to the country.
While Thein Sein has acknowledged the problem of endemic graft and has launchedahigh profile anti-corruption campaign – highlighted by the ongoing investigations into the telecommunications industry – other military-linked politicians have played down the extent of official corruption and its impact on the sustainability of reforms.
In an interview in Naypyidaw, Union Solidarity and Development Party (USDP) vice-chairman Htay Oo dismissed allegations of rampant corruption, both now and during the previous military regime he served. ”We were all ministers then,” he said, referring to the previous ruling military junta. ”And we were not corrupt. We are trying hard to reduce corruption in our country. The government is makingagreat effort to reduce corruption. The recent news of corruption has only emerged because of the government action, otherwise it would have stayed hidden.”
Indeed, other cases have emerged. A report published by The Voice weekly journal that quoted from an internal attorney general report indicated major corruption involving six different ministries, including at the ministry of mines. The newspaper’s editor was charged with libel and forced to attend over 30 different court hearings before the charges against him were dropped. Nobody has yet been charged for the corrupt practices alleged in the attorney general’s report.
Corruption charges were often used for political purposes under the previous military regime, including during the 2004 intra-junta purge of former intelligence chief and prime minister Khin Nyunt and his political associates. Now, some analysts wonder whether the probe into the telecommunications ministry, which threatens to ensnare certain of Shwe Mann’s family members, could beasimilar power play.
Thein Tun has threatened to implicate ”more senior people” if he is formally charged and tried in court. Brigadier General Thein Zaw,aprevious telecommunications minister and now the chief minister for Kachin state, is also under investigation, according to the government source. He also hinted that at least one former senior member of the Myanmar Posts and Telecommunications (MPT) ministry had turned state witness in the case.
”We know everything now,” said the official, who claims to be close to the still pending investigation.
According toapolice source familiar with the probe,asuitcase containing US$2 million in cash was allegedly found in Thein Tun’s residence. Investigators are trying to establish whether the alleged funds may have originated from foreign firms, including major Chinese companies Huawei and ZTE known to be angling for potentially lucrative telecom contracts in Myanmar, according to the same source.
Authorities are also trying to gain access to bank accounts in Bangkok, Hong Kong and Singapore where kickbacks to senior ministry officials may have been deposited, according to the same source. Both Chinese companies have voluntarily given investigating authorities documents related to their previous deals with the MPT ministry, including during Thein Zaw’s tenure as minister, according to the police source.
Local telecom-related companies, including Htoo company subsidiary Elite and Red Link, are also under scrutiny, according to the police source. Red Link is owned by Shwe Mann’s younger son, Toe Naing Mann. The company was formed in 2008 and provides internet services that it acquired fromajoint venture with the MPT ministry. With less than 2% of the population on-line, Myanmar has one of the lowest Internet penetration rates in the world.
The fact that former finance minister Hla Tun, regarded by some as an anti-corruption crusader, is overseeing the investigation has been viewed by some as indication of the importance President Thein Sein has given the potential landmark case. Hla Tun is regarded as the ”president’s conscience”, according to another source close to Thein Sein.
Some analysts argue that if Thein Sein’s anti-corruption campaign and wider bid to introduce greater accountability and transparency in government economic dealings, including with foreign partners, is to be taken seriously, then formal charges should be lodged regardless of the political consequences. To date, Thein Sein has yet to decide whether to proceed with charges against either or both former telecoms ministers, according to the police source.
”This impunity will simply sendastrong signal that economic reform is, in fact, just another way for the connected and the powerful to rip the wealth from country and the ordinary people,” said Sean Turnell,aspecialist on Myanmar economic matters at Macquarie University in Australia, about the pending investigation into the telecoms ministry. ”Corruption isabarrier to real investment and above all pervasive corruption undermines public support for the broader reform process,” he said.
Other investigations, includingaprobe that has implicated former fisheries minister Maung Maung Thein, have been launched only to later stall. In March, Khin Ko Lay,asenior bureaucrat in the fisheries ministry, was summarily dismissed on the president’s orders for alleged corruption. He was reportedly ordered to pack his bags and leave immediately without returning to his office, according to an official who was present at the meeting.
Current fisheries minister Ohn Myint could be next, according to government insiders. Thein Sein cancelled Ohn Myint’s recently planned visit to France – reportedly organized and paid for byaprivate French company – for undisclosed reasons. His new role in peace talks with Kachin rebels, however, may give himareprieve and explain the cancellation of his trip, according to the insiders.
There have been other reports from the interior ministry that home minister General Ko Ko is also under investigation for possible corruption. His personal assistant, however, dismissed these as unfounded rumors fueled by reports on the internet. Others have raised questions about agriculture minister Myint Hlaing, including his promotion of an expensive rice hybrid imports that many experts believe is inappropriate for Myanmar’s climate and terrain.
The opposition is pushing for top-level convictions. ”We all know about this corruption – all the country’s citizens know about it,” said Nyan Win, spokesman for the National League for Democracy in an interview at the opposition party’s headquarters in Yangon. ”The ministers must be prosecuted. If the government has evidence of their corruption they should try them in the courts, even if it reaches up to the very top.”
Some political analysts, however, believe that the evidence that has been gathered – rather than form the basis of any future prosecutions – will instead be used to contain Shwe Mann’s political ambitions for the presidency. ”They have all the evidence now, especially to use to black mail Shwe Mann,” saidagovernment source.
USDP vice chairman Htay Oo dismisses such suggestions as political speculation. ”Of course there are differences within the party,” he conceded. ”But these are being dealt with inagentlemanly manner and will not disrupt the party.”
အဘက ချာရာဂျီးဘာ အဘရယ် ..
ခု ဘာသာပြန် သင်ခန်းစာ အတွက်လည်း
ကံဇတ်ဆရာရဲ့ အလိုကျ ဆိုဒါဂျီး တွေ့ပေါ့ရော ..
အိုက်ဒါ အိုက်ဒါ ….
ယခုလည်း စာရေးသူက …..!!??
အနော်လည်း ဘဖော ဘာသာပြန်သလောက်စာကြောင်းလေးတွေပဲဖတ်သွားတယ်။
ကျနော့ နှလုံးအခြေအနေကလည်း မကောင်းးး:
ကျနော့ နှလုံးအခြေအနေကလည်း မကောင်းးး
ခက်တာက တစ်လုပ်မက စားထားတာလေ
တစ်လုပ်မက စားထားတော့ စားပိုးနင့်သွားတယ် ပြောရမပေါ့နော
ဦးမာဃလဲ နှလုံးရော သွေးတိုးရော (တာဝန်အရ) ရှိသမို့
ဘာသာပြန်ကနေ ရှေ့ မတက်ဖြစ်လိုက်ပါဘူး
ထောင်မြင်လို့ ရာစွန့်တယ်ပဲ ပြောရမလား……………………..
အဘက.. တစ်ပုဒ်လုံး ဘာသာပြန်ရင်ရပမဲ့..
ဆောင်းပါးရဲ့ ပေးချင်တဲ့ မတ်စိကို Note ထုတ်ပြီး
ဆောင်းပါး ကွန်ကလူရှင်းကို ပေးသွားတယ်လို့
မြင်ပါတယ်။ ရေးရင်နဲ့ အဘဖောတောင် ရင်ဘတ်အောင့်လာတယ်ဆိုတော့
ကျနော်လည်း ဟိုသီချင်းလေးဆိုရင်း အောင့်လိုက်ဦးမယ်ဗျာ..
ကိုရင် ရေ သတိထားပါ ။
မြန်မာ သင်္ဘောသားတွေကို ၊ မွတ်ဆလင် ဘာသာဝင်တွေက ၊
ပြဿနာ ရှာ / ရန်လုပ်နေတဲ့ သတင်းတွေ ၊ ဆက်တိုက် တက်နေတယ်နော် ။
တစ်ချို့ မြန်မာ သင်္ဘောသားတွေ ပြန်လာ / ပြန်လွှတ်ခံ ကြရတယ် ။
ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက် ။
” အလမ် မာရီတင် မှာသင်္ဘောပေါ်ရောက်နေတဲ့ဓာတ်ကြိုးများအား လုံးသတိထားကြပါ
အခုမနက် ၁ဝ ၃ဝ မှာရတဲံသတင်းပါ
မြန်မာပြည်က ကုလားကိစ္စ အကြောင်းပြုပြီး ကျနော် တို့ကို စတင်နှိပ်ကွပ်ပါပြီ
ကိုနေ တို့ ကိုတင်တို့ ကိုဖုန်းဆက်တာမရလို့ ဒီမှာလာတင်ရတာ
အဘရေ.. သွားနေရတာက အာရပ်ပင်လယ်ကွေ့နားတွေ..
ဘာသာရေး စတောင်းဖြစ်ချက်ကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ..
ဘောဘောပေါ်မှာနေတာ ပြသနာမရှိပေမဲ့..။ ဂိုးရှိူးဆင်းရင်တော့
အင်မတန် အင်မတန် သတိထားပြီး ကိုးစ်စဂတ်ကို ဖြေရပါတယ်။
မိတ်ထီလာဖြစ်ခဲ့တုန်းက ပြောခဲ့ပါတယ်… အစ္စလာမ် ပြည်ရောက်ဗမာတွေ
အသက်၊ စည်းစိမ်.. မလုံခြုံတော့ဘူးလို့… ခြံထဲက ကြက်ကို မောင်းထုတ် ရိုက်သတ်နိုင်ရုံနဲ့
ဘာသာရေးသူရဲကောင်းဘွဲ့ခံချင်သူများ မူစလင်တွေကြား မျက်နှာဇီးစိနဲ့
လုပ်စားနေရတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဘဝကို တချက်လောက် ငဲ့ကြည့်ပါဦးလို့..
အသိတစ်ယောက် ရဲစခန်းထဲ မှာ တောင်းပန်ခဲ့ရတဲ့
စကားလေးတစ်ခွန်းကို ရေငန်ပိုင်ကြီးရဲ ့ပို ့စ်ထဲမှာ မန် ့ခဲ့ဦးမယ်ဗျာ ။
အဲဒါဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံမှာ တပ်ချ်စခရင်ဖုန်းတွေ မပေါ်သေးဘူး ။ မြန်မာဖောင့်လဲ မရသေးဘူးပေါ့ ။
သူက အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို အိမ်ထောင်ရှိမှန်း မသိပဲ
သူ ့ဖုန်းနဲ့အဲဒီ အမျိုးသမီး ဖုန်းဆီကို
““ မင်းမှာ ချစ်သူရှိလား ”” ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဘိုလိုမှုတ်ပြလိုက်တာ
“ Who make love for you ? ” တဲ့ဗျာ
ဖြစ်ချင်တော့ ၊ အဲဒီ စာ ဟာ အီဒီယမ် လို ပြန်ရင် ၊ “မင်းကို ဘယ်သူ fuck နေလဲ ” လို ့အဓိပ္ပါယ်တဲ့
ဘိုလိုမှုတ်ကျွမ်းသူ အသိခဗျာ ၊ ရဲစခန်းအထိ လိုက်တောင်းပန်လိုက်ရရှာပါလေရော
မြေ လတ်သား says:
ဘ ကလဲ ဆုံးးအောင်လဲ ဘာသာပြန်ဘူးဗျာ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ကျုပ်တို့နိုင်ငံက ပေးစရာ တောင်တွေဘာတွေ
ကြေးနီတောင်ပေးပြီးလို့ နောက်ထပ် အကြွေးပေးစရာကျန်သေးရင်
မြဝတီ နဲ့ ကော့ကရိတ်ကြားက ဒေါန တောင်ကိုပေးစေချင်တယ်ဗျာ။
ဘာလို့ဆိုတော့ ကျုပ်တို့သွားရလာရ အင်မတန်ခဲယဉ်းသဗျာ……….
အဲ့ဒီတောင်မြေပြန့် ဖြစ်သွားရင် သွားရလာရ ပိုမိုလွယ်ကူလာမယ်……………
ဆက်သွယ်ရေး အရှုပ်တော်ပုံက ၂၀၀ဝခုနှစ်ကထဲက စတာဆိုတော့ လက်ရှိအင်တာနက် မိုဗိုင်လ်းတယ်လီဖုံး ကန်ထရိုက်နဲ့ ကြီးပွားနေတဲ့ ခရိုနီတွေ ပက်သက်နေပါမယ်။ ခရိုနီမှာ နှစ်မျိုးရှိတယ်။ ပထမတမျိုးက အေးရှားဝေါလ်လို ဦးတေဇလို အာဏာသိမ်းစကထဲက ရလာတဲ့ငွေပုံအောပြီး ကန်ထရိုက်ရတာ၊ နောက်တမျိုးက ဦးသန်းရွှေမိသားစု၊ ဦးရွှေမန်းသားလို ရာထူးအာဏာ အသုံးချ စီးပွားရေးလုပ်တာ။ အဲဒီမှာ ရာထူးပါဝါ ဗန်းပြလုပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် လိုအပ်တဲ့ အရင်းအနှီးကို ဆောင်းပါးပါ ချေးငွေတွေကနေ မဆိုသလောက် အတိုးနဲ့ ဖန်တီးပေးမယ်ထင်တယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကို သူတဝက် ကိုယ်တဝက်ပေါ့ဗျာ… ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း ထောက်ပံ့မှုကို ပိုက်ဆံချေးပေးတဲ့ တရုတ်ကုမ္မဏီက လက်ဝါးဂျီးအုပ် လုပ်ကိုင်စားသောက်မယ်။ လက်ကိုင်ဖုံး အင်တာနက် အသုံးပြုသူ မြန်မာပြည်သူတွေက ကုန်းရုန်းဆပ်ကြပေါ့ဗျာ။ ဘွားဒေါ်ဂျီးကတော့ ကောင်းတဲ့ ခရိုနီလည်း ရှိပါသေးတယ်တဲ့…။ ဦးသိန်းစိန် အဖွင့် ဘွားဒေါ်ဂျီး အပိတ်.. စိန်စုဇာတ်သဘင်ဂျီးပေါ့ဗျာ။ ကဂျ ကဂျ သို့ပေမဲ့ အကမတော်ရင် ငှက်ကထ ဥရွှေမန်း ကြားကဥညှပ်မှာ စိုးရတယ်..။ ဗေထိ ဗေထိ ဗေပုံထိ… ယခုဆက်လက် ကပြအသုံးတော် ခံမှာကတော့ ဇာတ်မင်းသမီး မဟုတ်တရုတ် ကြေးမုံဂျီးနဲ့ မဟုတ်မခံ ကကြောင်ကြီးတို့ရဲ့ နှစ်ပါးသွားအက ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား.. လက်ခုပ်တီးဂျပါ..
ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်း.. :harr: :harr: :harr: